သင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက်ဘွဲ့လိုအပ်ပါသလား သတင်းစာဆရာ ?
သငျသညျဖြစ်ကောင်းယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ, ကောလိပ်ဘွဲ့ရပိုပြီးငွေရှာနှင့်ကောလိပ်ဒီဂရီမပါဘဲတွေထက်အလုပ်ခံရဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင်းကြားဖူးတယ်။
ငါအကြောင်းကိုရှေ့မှာစာရင်းမှတ်ပါတယ် တဲ့သတင်းစာပညာဘွဲ့ရတဲ့၏အကောင်းအဆိုး cons အခြားသောလယ်တစ်ဒီဂရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်များစွာသောကျောင်းသားများအနှစ်နှစ်တွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီသို့မဟုတ်လက်မှတ်အလုံအလောက်ပါလျှင်၎င်းတို့သည်တောင်ဘွဲ့လိုအပ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်ရှိမရှိမေးရာအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှာသင်ကြားပေးကြသည်။
အခုတော့တက BA ဘွဲ့မရှိဘဲသတင်းစာပညာအလုပ်တစ်ခုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ ငါမှာအစီရင်ခံအလုပ်အကိုင်များဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့သူတော်တော်များများကျောင်းသားများကိုဖူး သေးငယ်တဲ့စာတမ်းများ ဖွင့်ထားတဲ့တွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီနှင့်အတူ။ ရုံနှစျခုနှစ်ဒီဂရီနှင့်အတူလက်နက်ပါမိုင်းဟောင်းတစ်ဦးကကျောင်းသား, Montana, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, Pennsylvania ပြည်နယ်နှင့်ဂျော်ဂျီယာအတွက်စာတမ်းများမှာအစီရင်ခံအရင်ဖျော်ဖြေလုပ်နေတာခန့်ငါးနှစ်တိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်ကိုသူ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သင်တို့ဆီသို့ရွှေ့ချင်လျှင်မူကားနောက်ဆုံးမှာ, ပိုကြီးပြီးပိုဂုဏ်သတင်းစာတမ်းများ နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတစ်ဘွဲ့၏မရှိခြင်းသငျသညျကိုထိခိုက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, အလတ်စားကြီးမားတဲ့သတင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာတစ်ဘွဲ့နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အတော်များများကသတင်းထောက်များကိုသတင်းစာပညာတွင်သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးအထူးပြုဧရိယာဖြစ်စေ, သခင်၏ဒီဂရီနှင့်အတူလယ်ပြင်ဝင်ရောက်နေကြသည်။
သတိရပါခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးတွင်တစ်ဦးအတွက် သတင်းစာပညာများကဲ့သို့အပြိုင်အဆိုင်လယ်ပြင် , သင့်ကိုယ်သင်တိုင်းအားသာချက်ပေးချင်နေတဲ့တာဝန်ယူမှုကိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် saddle မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါဘွဲ့၏မရှိခြင်းနောက်ဆုံးမှာတစ်တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
စီးပွားရေးစကားပြောသော, လေ့လာမှုများ၏နံပါတ်ကောလိပ် grads ယေဘုယျအားရုံအထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီနှင့်အတူတွေထက်အများကြီးနိမ့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းရှိသည်ပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစီးပွားရေးမူဝါဒ Institute မှမကြာသေးမီကောလိပ်ဘွဲ့ရဘို့, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် (2007 ခုနှစ် 5.5 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) 7.2 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါသည်, နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲမှုနှုန်း (2007 ခုနှစ် 9.6 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) 14.9 ရာခိုင်နှုန်းကိုကြောင်းတင်ပြထားပါတယ်။
သို့သော်မကြာသေးမီအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရဘို့, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် (2007 ခုနှစ် 15.9 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) 19.5 ရာခိုင်နှုန်း, နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲမှုနှုန်း (2007 ခုနှစ် 26.8 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) 37.0 ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်ငွေခွန် ကိုလည်းပညာရေးကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကမဆိုလယ်ပြင်၌ကောလိပ် grads လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုရုံအထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီနှင့်အတူတွေထက်ပိုပြီးဝင်ငွေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
သင်တစ်ဦးမာစတာဘွဲ့သို့မဟုတ်မြင့်မားသောရှိပါကနှင့်အညီ, သငျသညျ ပို. ပင်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက Georgetown လေ့လာမှုသတင်းစာပညာသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်လတ်တလောကောလိပ်ကျောင်း grad များအတွက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ $ 33000 ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ; ဘွဲ့ရဒီဂရီကိုင်ဆောင်သူထိုသို့ $ 64,000 ခဲ့
အားလုံးလယ်ကွင်းကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ဦးမာစတာဘွဲ့တစ်ဦး၏အဆိုအရအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာထက်တစ်သက်တာဝင်ငွေရရှိမှုအတွက် $ 1.3 သန်းကိုပိုမိုရကျိုးနပ်သည် အစီရင်ခံစာ အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကနေ။
လူကြီးရဲ့အလုပ်လုပ်ဘဝကျော်, အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရ $ 1.2 သန်းဝင်ငွေပျမ်းမျှအားဖြင့်မြျှောလငျ့နိုငျ, ဘွဲ့နှင့်အတူသူတို့က, $ 2.1 သန်း; နှင့်မာစတာဘွဲ့နှင့်အတူလူတွေ, $ 2.5 သန်း, သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုအစီရင်ခံစာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"အများဆုံးအသက်အရွယ်မှာပိုပြီးပညာရေးပိုမိုမြင့်မားဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ထားသည်, ထိုငွေပမာဏသည်အမြင့်ဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်မှာအသိသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျနီဖာ Cheeseman နေ့, သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုအစီရင်ခံစာ၏ Co-စာရေးဆရာကဆိုသည်။
သင်တစ်ဦးကောလိပ်ဒီဂရီကတန်ဖိုးရှိရှိမရှိအံ့သြနေလျှင်မူကား, ထိုအရေးအသားမြို့ရိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်: သင်ရှိသည်ပိုပညာရေး, သငျသညျကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်ပိုပိုက်ဆံ, နှင့်လျော့နည်းဖွယ်ရှိသင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
သတင်းစာပညာကျောင်းသားများသည် 10 Newswriting စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု
သတင်းစာပညာဂျော့ဘ်နှင့် Careers အမျိုးမျိုးမှာတစ်ဦးကမျှော်
အဆိုပါ AP သတင်းဌာနမှာအလုပ်လုပ်
ပြည်သူ့ Read စေချင်ကြလိမ့်မည်ဒါကကိုယ်ရေးကိုယ်တာပရိုဖိုင်ရေးအတှကျအရာခုနစ်ပါးသိကောင်းစရာများ
ဗဟိုမက္ကဆီကို၏ Aztec အင်ပါယာမှ Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းဗန် Halen သီချင်းများ
(ကိုဘှားမွငျမှ) "Ennuyer" Conjugate လုပ်နည်း
လေ့ဟင်စကားပေါ်တွင် Big ပဟေဠိ
ထိပ်တန်း 10 ဦးအမိုက်ဆုံးစားပွဲထိုးနိုင်ငံမိန်းမတွေက
ကျွန် Timeline ကို 1619 1696 မှ
အီတလီကြိယာ conjugation: Sedersi
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: အထွေထွေဟင်နရီ "Hap" အာနိုး
Big နက္ခတ္တဗေဒကနေငါးက Short Stories
မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေး: Veracruz ၏အလုပ်အကိုင်
အရင်းအမြစ် Code ကိုအတူ THook Delphi အတန်းအစား
ဂစ်တာအဘို့အ Finger ညှိနှိုင်းရေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိဖွံ့ဖြိုးဆဲ
RC transmitter နှင့် Receiver ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
Cómo puede un extranjero divorciarse en Estados UNIDO
အမှောင်ထဲမှာကိုပြောပြပါ 13 Creepy ကြောက်စရာဇာတ်လမ်းများ
ပြင်သစ်နှာခေါင်း Vowel: အနှာခေါင်းမှတဆင့်
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: -phile, -philic